Iflethi okanye indlu ekwicomplex entle enendawo yokupaka engabhatalelwayo eseyadini - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex entle enendawo yokupaka engabhatalelwayo eseyadini
Indawo ekukho umntu oncedisayo kuyo yonke sinombuki zindwendwe onguAlexander
Buyela emva kwaye uphumle kule ndawo izolile, enesitayile. Yonke indlu yesitudiyo yeyakho ukuba uyonwabele njengoko uthanda.
Ithandeka kwaye inoxolo, inefenitshala epheleleyo kunye negumbi elihle kweyona ndawo idumileyo kwiSiqithi saseVictoria, eLagos. Okuyi ~8 min ukuya e-Ikoyi, ~12 min ukuya eLekki, ~12 min ukuya eLandmark Beach.
Ilungele iintsapho, izibini, abantu kunye nabahambi beshishini kwaye inokhuseleko lwe-24/7 kwindawo, unikezelo lwamandla angama-24/7 ngaphandle kokuphazamiseka. I-AC, ikhitshi epheleleyo, igumbi lokuhlambela eligcweleyo kunye ne-heater njl.
Le ndawo ineeflethi okanye izindlu ezikwicomplex eziyi-5 ibe le yiflethi okanye indlu ekwicomplex enombolo
Yonke le flethi isetyenziswa ziindwendwe kuphela, equka:
- iflethi okanye indlu ekwicomplex eyi-1 enebhedi enkulu.
- Indlu yangasese enendawo yokuhlambela yale mihla enendawo yokufudumeza amanzi.
- Ikhitshi elipheleleyo elinesitovu, ifriji, ioveni ye-microwave, izinto zokupheka njl.
- Indawo yokuhlala enesikrini esikhulu seTV kunye ne-DSTV.
- Idesika nesitulo ukuba ufuna ukufunda okanye ukusebenza
- Iveranda entle enezityalo eziphilayo.
oqhubekayo Oku kubhukisha kuhamba nenkonzo yokunceda ukuze kube lula kuwe.
Le flethi ikwindawo ebiyelweyo neneendawo ezibiyelweyo ezifumaneka imini nobusuku ngabasebenzi bezokhuseleko kunye namanyathelo okulawula ukufikelela kuyo yonke into kwindawo ekhuseleke kakhulu.
Ixhaswa kakuhle ngumbane kawonke-wonke kunye nezinto ezisebenza ngombane ezifumaneka imini nobusuku ngaphaya kweendlebe.
Kukho indawo entle eluhlaza ejikeleze le ndawo.
43" HDTV ene-intambo yepremiyamu
Kukho uluhlu olupheleleyo lweendawo ezinomdla ebumelwaneni. I-Elegushi Royal Beach, i-Lekki Conservation Centre, i-Tarkwa Bay, i-Palms, i-Lounge Elegushi (i-Queen's Park), i-Fahrenheit, i-Hard Rock Cafe, i-Vapors, uMnu Chang, i-Rhapsody kunye noluhlu luhamba ngokuqhubekayo.
Jonga incwadi yesikhokelo endikwenzele yona kwaye incamathele kolu luhlu ukuze ufumane ezi ndawo kunye nokunye.
Ndifumaneka nge-inbox ka-Airbnb, ngesms, ndifowunele, njalo njalo. Zive ukhululekile ukuqhagamshelana nanini na.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Victoria Island